Fomban-drazana any Japon | Vaovao momba ny dia
Fomban-drazana any Japon
Mariela Carril | | mpitarika, Japana
Japana Manana fomban-drazana marobe izy io, fa araka ny fotoan'ny taona dia hitako fa fotoana mety hiresahana izao. Fomban-drazana Japoney vaovao. Amin'ity lafiny an'izao tontolo izao ity, ny "faran'ny taona" dia midika hoe Krismasy sy Taom-baovao, saingy azo antoka fa tsy firenena Kristiana i Japon.
Mbola misy fomban-drazana Krismasy avy any ivelany izay mampihetsi-po tokoa ankehitriny. Fa ny zava-dehibe dia ny fahalalana fa misy ny fomba amam-panao amin'ny Taom-baovao ary hiresaka momba izany rehetra izany isika ao amin'ny lahatsoratray anio.
Japon sy ny fomban-drazana amin'ny faran'ny taona
Voalohany dia mila milaza an'izany ianao Ny fankalazana ny taom-baovao no zava-dehibe indrindra amin'ny fialantsasatra Japoney. Antsoina ny Taom-baovao shogatsu ary mandritra ny andro vitsivitsy, eo anelanelan'ny 1 sy 3 janoary amin'ny ankapobeny, mivory ny fianakaviana ary ny ankamaroan'ny toerana anaovana orinasa dia manintona ny jamba.
Fomba iray izay lasa somary very any Andrefana ny fandefasana karatra faran'ny taonana, miantso eto nenga, fa eto dia mbola be mpitia. Tsy maintsy alefa alohan'ny daty iray izy ireo satria tsara kokoa raha tonga amin'ny andro mitovy izy ireo, 1 Janoary.
Taorian'ny toe-tsaina aziatika, ny taona mifarana dia ny lasa ary isan-taona izay manomboka manolotra fotoana vaovao na fanombohana vaovao. Misy zavatra tsy maintsy vitaina, asa tokony hatao, fanoloran-tena mila tanterahina. Talohan'ny faran'ny taona, ny fety fanaovam-beloma na bonenkai.
Voaravaka ireo trano sy fivarotana mirehitra amin'ny zavatra vita amin'ny volotsangana, kesika ary serizy, diovina ny trano, akanjo, tsy maintsy ho vaovao sy vaovao ny zava-drehetra. Amin'ny alin'ny Taom-baovao dia misy ny azo antoka lovia izay nentim-paharazana toy ny toshikoshi soba na paty varimbazaha izany dia maneho ny faharetana. Lovia nentin-drazana hafa dia ny otoso inona ny divay vary mamy u ozoni, lasopy misy mochi. Atao na novidina mivantana koa ilay o-sechi ryori, sakafo hariva misy fangaro samihafa izay midika vintana, fanambinana, fahasalamana.
Ny alin'io alina io ihany mitsidika tempoly eo amin'ny 12 eo ho eo ny olona ary mihaona ihany koa na vitaina fety hanisa na hijery ny afomanga. Any amin'ny tempoly, amin'ny misasakalina, dia miantso ny lakolosy, indraindray im-108, amin'ny hetsika antsoina vatosoa tsy lahy. Ny isa dia maneho ny isan'ny fanirian'olombelona araka ny Buddhism ary ny hevitra momba ny fombafomba dia ny mamela ny fihetsem-po ratsy tamin'ny taona lasa.
Ireo mijanona ao an-trano koa matetika dia mirindra amin'ny seho mozika antsoina hoe kohaku uta gassen, miaraka amin'ny tarika j-pop. Amin'ny fotoana hafa dia misy lalao izay malaza toy ny hanetsuki, Badminton Japoney, Manidina papango na lalao takoage na karatra toy ny karuta. Mampalahelo fa somary tsy nampiasaina intsony izy ireo.
Ny andro 1 tamin'ny Janoary, fanombohana ofisialin'ny Taom-baovao, andro feno fambara io ary ny fihetsika tsara indrindra raisina mijanòna hahita ny fiposahan'ny masoandro. Ny fiposahan'ny masoandro voalohany amin'ny taona dia antsoina hatsu-hinodeAorian'io andro io dia ny fiainana tsy misy adin-tsaina na fanahiana. ny mitsidika tempoly, hatsumodeIo ihany koa ny filaharam-potoana ary fomban-drazana ny manao kimono nentim-paharazana ny vehivavy amin'ity fitsidihana ity. Ao Tokyo, ny tempoly malaza dia ny Meiji Shrine, fa afaka mitsidika azy ianao amin'ny 1, 2 na 3 Janoary. Na eo aza izany mandritra ireo andro ireo dia mipoaka amin'ny olona ity fitoerana masina ity.
Ny rivotra iainana amin'ireto tempoly sy fitoerana masina ireto dia tsara ka raha mandeha amin'ireo daty ireo ianao dia hanana fotoana mahafinaritra. Misy trano fivarotana sakafo, olona marobe mivavaka na mividy firavaka tsara vintana. Mahafinaritra, na be mponina aza. Any Tokyo dia ny Kuaria Meiji, any Kyoto dia Fushimi Inari Taisha, any Osaka dia Sumiyoshi Taisha ary any Kamakura dia Tsuruoka Hachimangu. Toerana malaza izy ireo ary ny mahazatra dia ny miandry mandra-pahatongan'ny efitrano malalaky mivavaka.
El 2 tamin'ny Janoary lovantsofina dia manondro izany ny emperora dia nanao fisehoana imasom-bahoaka tao amin'ny lapan'ny mpanjaka tany Tokyo. Miseho indroa isan-taona fotsiny izy io, izay no indroa rehefa misokatra ho an'ny besinimaro ireo zaridaina anatiny ao an-dapa. Amin'ny Taom-baovao sy amin'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahan'ny mpanjaka. Noho io antony io dia matetika ny olona no manatona ny lapa hahita ny amperora sy ny fianakaviany miseho eo ambonin'ny lavarangana ao ambadiky ny vera mifono vy matetika im-betsaka tamin'io andro io tamin'ny 10 ora maraina ary tsy nihoatra ny tamin'ny 2 tolakandro.
Tonga ihany koa ny taona vaovao madio sy milamina ary avelao ny trano ho diso hanombohana ny taona vaovao tsy misy zavatra rehetra. Io fanadiovana lehibe io no antsoina oosouji Ary ao anatin'izany ny vavahady an-trano izay azo antoka fa tsy voamarina mandritra ny taona, toy ny gorodona ao ambanin'ny vata fampangatsiahana sy ny entana. Raha misy zaza ao amin'io trano io dia fomba fanao izany omeo vola izy ireo anaty valopy. izany no antsoina otoshidama.
Raha eny an-dalambe ianao dia ho hitanao fa maro ny olona manatona ireo fivarotana ary mividy kitapo amin'ny vidiny samihafa. Tsy fantatr'izy ireo izay ao anatiny ary anisan'ny tsy ampoizina io fanao io fukubukuro, kitapo tsy ampoizina, ary manidina ara-bakiteny izy ireo satria malaza be.
Mazava ho azy fa firenena iray onenan'olona maro Ny herinandro farany amin'ny volana desambra sy ny voalohan'ny volana janoary dia manahirana ny fandehanana. Raha mandeha ianao, ny torohevitra dia ny hijanonanao amin'ny toerana iray sy hankafizanao tena, aza manandrana mihetsika be loatra satria ny lamasinina, seranam-piaramanidina sy bisy mipoaka miaraka amin'ireo olona izay hamangy ny fianakaviany. Teo anelanelan'ny 4 sy 5 janoary dia nifarana ny hectic.
Ary koa, amin'ny ankapobeny dia ho hitanao izany fivarotana, banky na toeram-pizahantany maro no mihidy eo anelanelan'ny 29 Desambra sy 4 Janoary, ka mametra izay azonao atao. Aza adino ny momba ny tranombakoka, fa ho valiny dia manana ianao toerana masina sy tempoly misokatra rehetra. Amin'izao fotoana izao dia vitsy kokoa ireo fivarotana mihidy, na dia amin'ny 1 Janoary aza dia saika fitsipika tsy an-kanavaka. Toy izany koa ireo trano fisakafoanana, na dia misokatra aza ny sasany amin'ny alin'ny Taom-baovao miaraka amin'ny menus manokana.
Amin'ny maha mpizahatany anao, ny alin'ny Taom-baovao mahafinaritra dia ny handeha hisakafo any amin'ny Tokyo Skytree ary avy eo hifindra hankafy ny fety malaza any Shibuya. Izay ny drafitro amin'ny taona ho avy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fitsangatsanganana any Azia » Japana » Fomban-drazana any Japon
Inona no ho hitanao ao Gijón